> Resource > Mac > Download ee Best Flip4Mac Alternative Mountain Libaaxa
Flip4Mac waxaa aad loogu yaqaanaa Windows Kooban Media u QuickTime. Waxa ay u ogolaataa dadka isticmaala Mac si aad u daawato video Windows warbaahinta iyo files audio la QuickTime, sida wmv iyo AVI iwm Si kastaba ha ahaatee, halkan, waxaan doonayaa in aan ku talinaynaa ah Flip4Mac kale caqli Mountain Libaaxa kaa caawinaya in aad on your computer Mac sameeyo. Taasi Wondershare Video Converter u Mac , kaas oo kuu ogolaanaya in aad si loogu badalo oo dhan qaabab windows media sida wmv, AVI, FLV, DivX, XviD, MPEG iwm in qaab Mac taageerto si fudud oo dhaqso. Sidaa daraadeed, waxa aad dareemi kartaa si xor ah u ciyaaro dhow file kasta oo warbaahinta-qaab oo ay ka mid wmv on Mountain Libaaxa ama ciyaaryahan kale oo warbaahinta. Waa maxay dheeraad ah, waxa kale oo aad kala soo bixi kartaa online videos, diinta, gubi & nuqul DVD iwm Hadda, waxaad idin ​​tusin doonaa sida si loogu badalo wax video in ay sare la jaan qaada Mountain Libaaxa, muujisay sida soo socda:
1 Import video files si u dhiganta Flip4Mac this Mountain Libaaxa
Wixii file kasta oo warbaahinta suuqa kala in aadan ka ciyaari karaa Mountain Libaaxa, kaliya iyaga dajiyaan in app si loogu badalo. Waxaad ka heli kartaa files on computer ugu horeysay oo iyaga si toos ah jiidi & iyaga hoos u barnaamijkan. Sidoo kale, waxaa jira hab kale oo aad u isticmaali karto. Just u tag "File"> "Media Load Files" doorasho ka menu ugu weyn in Eebe idin soo dhoofsadaan aad files warbaahinta doonayo.
2 Dooro qaab Mac taageerto sidii qaab wax soo saarka
Sida aan ognahay, MOV si buuxda u la jaan qaada Mac, gaar ahaan QuickTime. Sidaas halkan, waxaan dooran MOV sida qaab wax soo saarka. Qeybta hoose ee Murayaad this app ee, kaliya waxaa guji qaab icon ah, ka dibna dooro "MOV" fsrom "Video" ka dib markii liiska laga dhisayaa-up format.
3 bilow diinta video on Mountain Libaaxa
In koonaha midig ee Mac Video Converter 's interface ugu weyn, kaliya ka dhacay badhanka "Beddelaan". Hadda, aad bilowday tan bedelka flip4mac smart Mountain Libaaxa si loogu badalo video files. Ka dib markii ay diinta ka, kaliya aad u ciyaaro faylasha la gediyay aad QuickTime. Waad la yaabi doontaa si aad u ogaato QuickTime kuwaas files warbaahinta ka ciyaari kara habsami la'aan plugin Flip4Mac Waxaad.